Uncategorized – Page 66 – Shabakadda Amiirnuur
Faahfaahin: Ciidamo Ka Tirsan Al-Shabaab oo Saacaddii 4-aad Hawl Gal Ka Wada Hotel Si Aad Ah Loo Ilaaliyo oo Ku Yaalla Kismaayo.
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab saacaddii 4-aad ku jira hotel caan ah oo ku yaalla magaalada Kismaayo kaasoo ay deggan yihiin xubno ka tirsan maamulka Jubbaland. Hotelka oo lagu magacaabaa Cascaseey ayaa waxaa markii hore lagu weeraray weerar uu hogaaminayay naftii hure waxaana xigay askar xoog ku galayaal ah oo gudaha u […]
Ganacsatada Yar Yar Ee Garowe oo Ka Cabanaya Canshuur Xad Dhaaf Ah. (Dhageyso)
Maamulka Puntland ayaa canshuur xad dhaaf ah kusoo rogay ganacsatada yar yar ee magaalada Garowe, gaar ahaan kuwa khudaarta iyo wax yaabaha lamidka ah iibiya, xilli aan canshuur badan laga qaadin Qaadka ka yimaada Itoobiya. Haweenka khudaarta iibiya ayaa waxay sheegayaan in maamulka hoose ee Garowe uu ula dhaqmay si […]
Dhageyso Gabay Ku Socda Cag-jar Wakiilka Itoobiya Ee Dhulka Soomaali-Galbeed.
Suugaantu waxay kamid tahay wax yaabaha dadka dareensiiya ama deeqsiiya warka iyo macluumaadka, waxayna noqotaa keyd taariikheed oo berri ummadu wax ku dhisato. Haddaba dhageystayaal/akhristayaal waxaan halkan idinku soo gudbineynaa gabay xiiso leh oo ku socday Mustafa Cagjar oo ah hogaamiyaha dhulka ay Xabashidu inaga heysato ee Soomaali Galbeed. Gabaygan […]
Faahfaahin: Xukunno Xadurido Ah Iyo Mid Dhagax Ku Dilid Ah oo Ka Dhacay Jamaame.
Magaalada Jamaame ee wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka waxaa ka dhacay xukuno isuga jira Xaddu-ridda iyo Rajmin, kuwaas oo lagu fuliyay dad isuga jira rag iyo dumar. Sadax ka tirsan dadkan waxaa lagu fuliyay xukun Xadu-rido ah, halka midkood lagu fuliyay xukun Rajmi ah. Labo kamid ah waxay ahaayeen askar ka […]
Dowladda Federalka oo Galmudug U Aqoonsatay Wadan Kale.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee DF, Axmad Ciise Cawad oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay hadal ay si aad ah ula yaabeen dad badan, kuna muujiyay in maamulka Galmudug yahay wadan ka baxsan Soomaaliya. Xilli uu faahfaahin ka bixinayay warbixin uu ajaanibta Xalane ka siiyay dal uu sheegay […]
Xilli maalintii shalay ay Xarakada Al-Shabaab, degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose ku dileen 5 nin oo lagu eedeeyay iney basaasiin u ahaayeen Mareykanka, Kenya iyo DF, ayaa waxay maantana xukun kale oo kaa lamid ah ka fuliyeen fagaare ku yaalla degmada Salagle ee gobolka Jubada Dhexe. Sadax kamid ah […]
Caqliga wanaagsan mararka qaar ayaa wuxuu ka roon yahay itaalka, waxaana jeclahay inaan halkan idinkugu soo gudbiyo qiso cajiib leh oo ka dhacday Koofurta Soomaaliya. Waa qiso kooban balse cilmi iyo garasho badan laga helayo, marna kaa qosol siineysa! Haddaan sheekadeeda horey u galo. Nin suufi ah oo si hoose […]
Faahfaahin: Al-Shabaab oo Galabta 5 Nin oo Basaasiin Ahaa Ku Dilay Degmada Xagar Ee J/Hoose.
War degdeg ah oo goor dhow kusoo dhacay xafiiska War-qabadka ee Radio-Al-furqaan ayaa sheegaya in galabta uu xukun Xadu-Rido ah ka dhacay fagaare weyn oo ku yaalla degmada Xagar ee Gobolka Jubada Hoose. Ragga la dilay oo ay tiradoodu dhammayd 5 nin ayaa waxaa ku cadaatay iney Basaas u ahaayeen […]
Afqaanistaan ayaa duullaan ballaaran ku qaaday askar katirsan xukuumadda Kaabul ee la shaqeeya Shisheeyaha duulaanka ku jooga wadankaas. Dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan, una muuqday mid Dhaalibaan si wanaagsan usoo qorsheysay ayaa lagu qaaday xarunta degmada Macruuf ee wilaayada Qandahaar, halkaasna waxaa ka dhacay dagaal faraha looga gubtay. […]